Beninkaz wax gourd: nkọwa, ịkụ na-elekọta - Ugu - 2019
Ịkụ mkpụrụ na ilekọta otu ugu beninkaz n'ogige
Beninkaz ma ọ bụ gọọd - onye na-egbuke egbuke nke ezinụlọ ugu. A na-akọkarị na Indonesia, China, Latin America. Otú ọ dị, beninkaz bụ osisi na-adịghị mma, n'ihi ya, a pụrụ ịkọ ihe ubi ya n'ebe ndị ọrụ ubi nọ na mbara igwe anyị.
Ị ma? Ndị na-agwọ ọrịa Chinese na-eji akwukwo nri mee ọtụtụ ọrịa.
Ihe na-amasị gị: ịhọrọ ebe ị ga-akụ n'ubi
Ụdị ọkụ dị aṅaa ka beninkaz na-ahọrọ?
Ala maka akuku beninkazy
Iwu nchịkọta nke osisi gourd
Esi kwadebe ala maka akuku
Otu esi echekwa ihe ubi
Ịkụ osisi na-emeghe n'ala
Atụmatụ na-elekọta beninkazoy n'ọhịa
Esi esi mee ka osisi ahụ dị mmiri
Kedu otu na mgbe esi eri osisi
Ntụnye na pollination nke beninkazy
Ugwu Pumpkin na Ọrịa
Ntụ ọka gourd
Gourd ma ọ bụ benyesz: nkọwa na uru nke ugu
Beninkaz (gourd) - omenala lianoid kwa afọ. E mepụtara usoro mgbọrọgwụ. Ihe ndị a na-eto eto ruo mita anọ n'ogologo, faceted. Na epupụta dị obere karịa ndị ọzọ ugu iche, lobed, ogologo-petiolate.
Okooko osisi nke gourd nwere nnukwu, na-ese ya na agba odo odo, na-esi ísì ụtọ.
Mkpụrụ osisi bụ oblong ma ọ bụ gburugburu. N'ebe anyị nọ, ha ruru kilogram 5, na ihu igwe dị ọkụ - nke ruru 10 kilogram. A na-ekpuchi mkpụrụ osisi na-achaghị acha na obere obere nkume na ihe mkpuchi yiri nke wax. Achịcha na-acha ọcha. A na-atụkwasị ha elu. N'ihi nke a, mkpụrụ osisi anaghị emebi ihe ruo ogologo oge.
Ọ bụ ogologo oge nchekwa (2-3 afọ n'okpuru ọnọdụ nkịtị, dịka ọmụmaatụ, n'elu mbara ihu ma ọ bụ n'elu ala n'ime kichin) nke na-amata ọdịiche nke ugbo ugbo a site na ndị ọzọ niile.
A maara Beninkaza na ọgwụ maka antipyretic, diuretic, na analgesic Njirimara.
N'ihi ntakịrị obere ya, ọ dị mfe iji ugu na-esi nri, dịka ọmụmaatụ, maka nri na ọkwa dị iche iche. A na-etinye mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na-achaghị acha na ụdị nke ọma na salads, na ndị tozuru okè - iji sie nri dị iche iche, efere nri, desserts.
Agrotechnics na-eto pumpkins beninkaza dị mfe, ma na-achọ nkwado siri ike na iwu.
Gourd - osisi ahụ na-ahụ ọkụ, ya mere ọ ga-adị mma ịmị mkpụrụ ma mị mkpụrụ naanị mgbe a kụrụ ya n'ọhịa. Na onyunyo amalite ịhapụ azụ na mmepe.
Nhọrọ kachasị mma maka beninkazy ga-abụ nke na-eme nri, ala mmiri na ezi mmiri. Nhọrọ ọkwa nke acidity bụ 5.8-6.8 pH. Ihe kachasị mma nke gourd sie bụ poteto, elu, kabeeji, carrots, beets, peas, agwa.
Ọ dị mkpa! A gaghị atụ aro ka ịkụ mkpụrụ beninkaz mgbe skwọsh, skwọsh, cucumbers, ụdị ugbo ndị ọzọ dị iche iche, dịka ụmụ ahụhụ ma ọ bụ ndị na-akpata ọrịa nwere ike ịnọgide na ala.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, ala a na-ewepụta maka beninkaz ga-egwu ala na nri a na-eweta. N'oge opupu ihe ubi tupu akuku mkpuru osisi n'ime oghere imeghe ga achoro ime ka nri fatịlaịza (15 g nke ammonium nitrate, 20 g nke potassium sulfate, 30 g nke ammophos kwa 1 sq. M nke ala).
Na-eto eto a ugu beninkaza na anyị latitudes nwere ike si na seedlings. Iji mee nke a, na ọkara nke abụọ nke Eprel - n'ọnwa mbụ nke May, a na-etinye mkpụrụ osisi 1-2 na ite ite. Mmiri ọdịda - ọ bụghị karịa 1-2 cm.
N'ihi na ọ bụ onye na-eto eto na-eto eto na-aga n'ihu na-emepụta ya, n'ihi na o nweghị oge iji chaa chaa.
Mgbe na-eto eto pumpkins na mba ahụ, a ghaghị itinye tankị mkpụrụ na ebe dị ọkụ (ihe dị ka 25 Celsius C na n'elu) ma kpuchie ya. Site n'oge ruo n'oge, ọ dị ha mkpa ikiri na ikuku. A na-atụ aro ka iwelata osisi ndị ahụ nso ka ha na-ebugharị, na-ewebata ha n'ikuku ikuku ruo ọtụtụ awa.
Na nkera nke abụọ nke ọnwa May - ọnwa nke mbụ nke ọnwa June, mgbe ọkụ na-ekpo ọkụ na-emesị biri, a na-akụ seedlings beninkaza na oghere dị anya nke 0.7-1 m site na ibe ha. Ebu mmiri na-esi na mmiri esi ebute.
Jiri nlezianya na-etinye seedlings site na ite dị na mbara ala, ọ na-ejupụta na humus ma ọ bụ akọrọ epupụta. Ruo mgbe osisi na-eto eto na-agbanye mgbọrọgwụ, ha na-aṅụ mmiri n'oge (7-8 lita nke mmiri ọkụ n'okpuru onye ọ bụla seedling).
Beninkaz maka agrotechnics chọrọ 1-2 irri kwa izu. N'okwu a, n'okpuru osisi ọ bụla mee 5-7 lita mmiri.
Ọ dị mkpa! Ejila mmiri oyi mee mmiri mmiri gwo. Usoro mgbọrọgwụ na-ata ahụhụ site na nke a, a na-emepụta mkpụrụ osisi ahụ.
Gourd siri ike bụ ihe oriri na-echebara nri. A na-atụ aro ugboro 2-3 kwa oge iji mee ihe ndị a:
20 g nke potassium sulfate;
20 g nke ammonium nitrate;
30-40 g nke ammophos (50 g nke superphosphate nwere ike dochie).
Ọ ga-diluted ke 10 lita mmiri. Otu osisi chọrọ 4-5 lita nke ọmụmụ.
A na-emepụta pollination nke beninkaze site na-ebufe okooko nwoke na nwanyi okooko osisi. Ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ obere ahịhịa.
Iji mee ka mmepụta mkpụrụ osisi na-emewanye ngwa ngwa n'August, a na-atụgharị akụkụ nke osisi ahụ. A na-adụ ụfọdụ ndị na-elekọta ubi ka ha tuo ya mgbe ụdị ovaries dị.
N'adịghị ka ndị ọzọ iche pumpkins beningaz adịghị na-arịa ọrịa, na-eguzogide ọgwụ pests.
A ghaghị iwepụ Beningazu tupu mmalite nke ntu oyi mbụ, kpochapụ ugu ya na steam. Ekwesiri ighota na nkpuru ndi akaghi aka agagh eguzo ogologo oge. Ha aghaghi imebi ngwa ngwa ma ọ bụ kpochaa, bee n'ime iberibe na oyi.
E nwere ike ịchekwa mkpụrụ osisi mpekere maka ọ dịkarịa ala otu afọ.
Ị ma? Ndị Aborigines jiri dị ka wax maka kandụl.
Gourd - A osisi nke na-adịghị achọ ka anya dị ukwuu, ya mere na dacha ya cultivation bụghị siri ike, ma diversifies nri gị.
Ọka dịka fatịlaịza maka ubi ahụ, iji fatịlaịza na-eto eto
Teknụzụ technology dị elu maka kabeeji: ọnọdụ, okpomọkụ na oge
Kedu ihe bara uru na mkpụrụ ya maka akụrụ? Kedu ka esi mebie osisi na otu esi etinye ya?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ịkụ mkpụrụ na ilekọta otu ugu beninkaz n'ogige